Salt Lake City (KSLC) bụ obodo dị na United States, isi obodo nke steeti Utah na oche nke Salt Lake. Nnukwu foto a-ezigbo ebe obibi na-ekpuchi obodo na mpaghara ya niile. Mkpebi ihu ọma dị otu mita site na pikselụ, gụnyere 10m resolution resolution elevation (ntupu).
Dakọtara na ha abụọ Prepar3D v4 na FSX, ndagwurugwu a na ọdọ mmiri ya na ọdọ mmiri nwere ọmarịcha ma ga-atọ ndị ahịa VFR ụtọ.
Mpaghara n 'ebe nchekwa: